Musharax Dr Siciid Cabdullaahi Deni oo kulan la qaatay Xildhibaanada 2-da Aqal ee laga soo doortay Puntland[Sawirro] | SAHAN ONLINE
Musharax Dr Siciid Cabdullaahi Deni oo kulan la qaatay Xildhibaanada 2-da Aqal ee laga soo doortay Puntland[Sawirro]
MUQDISHO – Musharax Dr.Siciid Cabdullaahi Deni ayaa Qado Sharafeed u sameeyey Xildhibaanada Aqalka Sare iyo kuwa Gobolaha Shacabka ee ka soo jeedo Puntland,waxa uuna u bandhigay Siyaasadiisa ku aadan Xilka Madaxweynaha oo u istaagay.
Musharax Deni oo khudbad dhinacyo badan taabaneyso u jeediyey Xildhibaanada ayaa Sharaxaad ka bixiyey wax yaabaha uu qabanayo hadii uu ku guuleysto Xilka uu isku soo taagay iyo Sababaha ku kalifay in uu go’aankaan qaato.
”Maanta Dalka waxa uu maraya Marxalad adag,Dalka waxa uu u baahanyahay Hogaamiye tayo leh oo badbaadinkara Shacabka Somaliyeed oo muddo sanado ah dhibaato ku jiray,Aniga waxaa iga go’an in aan la imaado Siyaasad ku dhisan Dad iyo Dal dhisid,Waxaa Xildhibaanada Sharafta ka Codsanayaa in aad Codkiina i siisaan si Yoolka aan hiigsanayo u gaaro”ayuu yiri Musharax Dr.Siciid Deni.
Maxamuud Axmed Maxamuud Mashruuc oo ka mid ah Xildhibaanada kulanka ka hadlay ayaa sheegay in si fiican u ugaranayo Musharax Deni goobjoogna u ahaa waxqabadkiisa ka dib Burburkii dalka,waxa uuna sheegay in Musharax Deni uu yahay Shaqsi mudan in dalkaan uu hogaamiyo.
Aniga Aqoon fiican ayaa u leeyahay Musharax Dr.Siciid Deni,waxa uu soo qabtay Howlo badan uu qofwalbo garankaro sida loogu faa’iiday,waxa uu horseed u ahaa in uu soo saaro Dadbadan oo haatan dalka Xilal ka hayo,waxaana soo dhaweenayaa Musharax Siciid Deni”ayuu yiri Xildhibaan Mashruuc.
Musharax Dr.Siciid Deni ayaa u mahadceliyey Dhammaan Xildhibaanada ka qeybgalay kulanka,waxa uuna ugu Hambalyeeyey Xilka ay ku soo guuleysteen.
Musharax Dr.Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka mid ah Musharixiinta la saadaalinayo in ay ku guuleystaan Xilka Madaxweynaha Somaliya,waxaana Siyaasiyiinta iyo Waxgaradka Somaliyeed ay sheegeen in Musharax Deni in uu Dalka u baahanyahay.